usekelo lwe-imeyili info@qdruidetai.com
Call Ukusekela 86-18661631650
Wire Rope Ukuphela nokufaka
Crosby Mini kokuzihlanganisa ratchet Uhlobo Layisha Binders Turnbuc ...
G450 HDG US Uhlobo Drop kokuzihlanganisa Wire Rope izibopho
M16 C15 Zinc Plated CR3 DIN582 kokuzihlanganisa Ukuphakamisa Eye Nuts
Dip Zezıhlabane lashukumisa G403 Emhlathini Ukuphela swivel
Lashukumisa Intulo Pin Bow Shackles G209
Ingxubevange Lensimbi Red Painted Drop kokuzihlanganisa Eye ukuphakamisa Liftin ...
Engagqwali Long D Shackles Long Uhlobo
1. Incazelo Engagqwali Long D Shackles Long Uhlobo
Material: Engagqwali, SS304 noma SS316
Ifanele ukusetshenziswa ne ephakamisa
2. umkhiqizo incazelo we Engagqwali Long D Shackles Long Uhlobo
Into: Engagqwali Long D Shackles Long Uhlobo
Uhlobo: Long Uhlobo
Usayizi: kusukela 4mm ukuba 12mm
Ukupakisha: isikhwama PP + ibhokisi + Pallet, noma ngokuvumelana amakhasimende '
Layisha port: Qingdao port noma ezinye izimbobo e China
Ukuthumela ngomkhumbi noma ngendiza
1. Ingabe imboni noma ukuhweba inkampani?
Saqala njengenhlangano ifektri ihange uchungechunge engaba ngu-20 edlule futhi kancane kancane zaba nomkhiqizi enkulu izimpahla zasolwandle.
Ngesikhathi esifanayo, ukuhlangabezana nezidingo ezikhulayo kusukela amaklayenti ethu ezindaweni ezintsha ibhizinisi, thina enwetshiwe ububanzi kwethu zokuboshelwa hardware kanye iziqobosho, nezinye hardware ahlobene ngokumisa ngokubambisana okuqinile nezinye izimboni.
Manje siyiqembu uyaziqhenya ukuthi Rui DE TAI uye ubalwe njengenye umphakeli phezulu emaketangeni & hardware zokuboshelwa enyakatho China.
2. ifektri yakho Umiswe kuphi?
kwemboni yethu itholakala Jimo, Qingdao Idolobha, Isifundazwe Shandong, China.
Ungene wamukela usivakashele noma nini ngokubambisana esizayo.
3. Yimiphi imikhiqizo ingabe ukuphakela?
Njengoba kushiwo ngenhla, ezidayisa zonke izinhlobo zosizo zasolwandle, nezigqizo, izinsika ze-hardware, iziqobosho, futhi hardware ahlobene.
4. Wenzenjani ukulawula izinga?
Ngokubeka up ukulawula izinga amaphuzu behlola ngaso ngamunye inqubo ukukhiqizwa izindinganiso eziqinile, imikhiqizo onesici kuyoqedwa phambi iphakeji ukulethwa.
Ukuze izimboni umlingani, sisebenzisa isimiso esibanzi namazinga izinga ukuhlola umugqa production. Futhi QC ithimba lethu professional uzoqalisa ukusebenza isheke akusayithi nangaphandle ukuqedela isheke umkhiqizo ngaphambi kokubeletha.
5. Kungani athembeke ukwedlula ezinye izimboni?
Thina impendulo zemibuzo yakho ngokushesha 24 amahora ngosuku, izinsuku ezingu-7 isonto ngalinye.
Thina unganikeza ngentengo wokuncintisana kakhudlwana esekelwe efanayo izinga ezingeni ngabaphathi kusheshe kakhudlwana kuzo zonke izinqubo.
Vele uthi okudingayo, futhi sizobe ukuthola isixazululo esisodwa ibhizinisi lakho ukuze ulondoloze
isikhathi nomzamo wokwenza kanjalo.
6. Sibonisa kanjani ukuthi ngikhokhe?
Samukela 30% yokukhokha kusengaphambili & 70% ingakafiki imithwalo ukubambisana kuqala, kungaba T / T noma L / C.
7. kanjani ngithola izimpahla?
Nge ezokuthutha zethu ejenti professional, sinekhono lokwenza imikhiqizo ukulethwa emathekwini amaningi emhlabeni wonke. Endlini ngendlu isevisi kugunyazwe futhi asekelwe. Fob, C & F, VGA zivame kakhulu ezisetshenziswa imigomo yokuhweba.
Siyakwamukela ukuthenga wholesale yethu ethengisa hot insimbi engagqwali eside d ngozankosi uhlobo eside. Sesikhathele omunye professional kakhulu futhi ehola imikhiqizo zokuboshelwa abakhiqizi nabaphakeli. Sicela khulula ukuthola isampula khulula kithi futhi uxhumane embonini yethu ukuthola ulwazi olubanzi.
Previous: 55T 2 1 / 2US Uhlobo Bolt Uhlobo Chain Shackles G2150
G80 Red Painted kokuzihlanganisa Uhlobo European Iyaxhuma ...
Lashukumisa Uhlobo Commercial Sakaza Iron Turnbuckles
EN13411-5 White lashukumisa Uhlobo oluthambile Wir ...
Engagqwali US Uhlobo Ukuphakamisa Intulo Pin Bow S ...
M8 A2 AISI304 Engagqwali DIN580 Ukuphakamisa Ey ...
M16 C15 Zinc Plated CR3 DIN582 kokuzihlanganisa Ukuphakamisa E ...
Kuyini ukusetshenziswa intambo yocingo Ukugunda?
Insimbi engagqwali Thimbles uxhumano
Iyini intengo insimbi engagqwali Thim ...
I Shackles izinsika e ukusetshenziswa pr ...
Ukwahlukanisa izingwegwe ephakamisa